वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : प्याराग्लाईडिङ्ग अनुभव
पोखरा देशको पर्यटकीय राजधानी। यहि परिचयमा हवाई खेलकूदको राजधानीरुपी परिचय थपिएको पनि धेरै भइसक्यो। प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाईट, जिप फ्लाएर आदिमध्ये पनि प्याराग्लाइडिङ्गले लोभ्याएको धेरै भईसकेको थियो। हरेक दिन बिहान नौ-दश बजेबाट पोखराको आकाशमा तैरिने रंगीचंगी ग्लाईडरहरु हेरेर धेरै बसियो, जाने मेसो अस्ति शनिबार बल्ल जुर्यो। पोखरा वरिपरिका अरु डाँडाहरु र पर्वत जिल्लाका डाँडाहरुमा पनि शुरु भईसकेको छ यो खेल अहिले।
सूर्योदय हेर्नका लागि लोकप्रिय गन्तब्य सराङकोटको टुप्पो अलिक नपुग्दैको एउटा पाखोमा रहेछ मलाई उडाउन लाने 'सराङकोट प्याराग्लाइडिङ्ग कम्पनी'को 'साइट'। फेवातालतिर फर्केको पाखोमा रहेछ यो साइट। १२ वर्ष अघि एकजना बेलायतीले भित्र्याएको प्याराग्लाईडिङ्गका लागि अहिले पोखरामा १२-१३ कम्पनीहरु तयार भईसकेछन्, प्याराग्लाइडिङ्ग लोकप्रिय हुँदै जाने क्रममा यी सबै कम्पनीहरु वर्षैभरि जसो ब्यस्त हुन्छन् रे मलाई उडाउने पाइलटका अनुसार। उनीचाहिँ एउटा बोर्डिङ्ग स्कूलको जागिर छोडेर त्यहि बेलायतीको कम्पनीमा काम गरेर यताको यात्रा शुरु गरेका छन्। अहिले उनी र अरु दुई साझेदार मिलेर यो कम्पनी चलाऊँदा रहेछन्। पाइलटहरुचाहिँ विदेशी र नेपाली दुबै रहेछन्। उनका अनुसार प्याराग्लाइडिङ्गमा झण्डै हवाइजहाजकै स्तरका नीति-नियमहरु छन् र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति चाहिन्छ। पाइलटको रुपमा काम गर्न चाहनेले ग्लाइडरलाई उडाउन र नियन्त्रण गर्न जानेर मात्र पुग्दैन। ऊ शारीरिक रुपले स्वस्थ र 'फिट' हुनुपर्ने त छँदैछ, पौडीमा पनि पोख्त हुनुपर्दोरहेछ।
उड्ने बेलामा यात्रु अगाडि र पाइलट पछाडि बस्छन्। "मैले 'वाक्' भन्दा हिँड्न थाल्नुस् र 'रन्' भन्दा दौडन थाल्नुस्। 'टेक अफ'को बेलामा अलिक बल लगाएर मलाई तान्नुहोला।" भन्ने निर्देशन थियो मलाई। अलिक बढीनै बल लगाएछु, त्यसैले केहि सेकेण्डका लागि अघिल्तिर बढी झुकेछु तर त्यसले खासै फरक पारेन। ग्लाइडरले एकछिनमै उचाई लियो र म चरा बनेर पोखराको सौन्दर्यपान गर्न थालें।
उचाई लाग्नेहरुलाई वाकवाकी र बान्ता हुने पनि हुन्छ रे कहिलेकाहिँ।
आकाशमा ६०-७० को संख्यामा उडिरहेका थिए ग्लाइडरहरु, एकापसमा ठोक्किएलान् जस्तो गरी। फेरि गिद्धहरु पनि प्रशस्त उड्नेरहेछन्। पाइलटका अनुसार जहाँ गिद्धहरु कावा खाईरहेका हुन्छन्, त्यहाँ हावाको उर्ध्वगामी दबाब बढी हुने रहेछ र त्यहाँ ग्लाइडरलाई लगेपछि त्यसले थप उचाई लिँदो रहेछ। दुई हातले समातिएका दुई डोरीको भरमा पूरै नियन्त्रण गरिँदो रहेछ। फोटो र भिडियो खिच्ने ब्यवश्था पनि हुने रहेछ ग्लाइडरमै, एउटा लामो 'अंकुशे'को टुप्पामा फिट गरिएको क्यामेरको मद्दतले।
३० मिनेटजतिको 'उडान'पछि फेवाको शिरतिर 'ल्याण्डिङ्ग' गरियो।
Pawan Paudel April 10, 2013 at 12:58 AM
नेपालको पर्यटकिय ठाउँ पोखरा त धेरै चोटी पुगियो तर यो प्याराग्लाईडिङको अनुभव अझसम्म लिन पाइएको छैन । अब अर्कोचोटी पोखरा जाँदा चरा जस्तै उड्नको लागि रु ५,६५० र फोटो र भिडियोको लागि १,७०० पहिला नै छुट्टाएर जानुपर्ला ? सुदुरपश्चिममा ती १५ दिन
Basant Giri April 11, 2013 at 6:11 AM
म नी करिब तीन महिना अगाडि यसरी नै उडेको, खुब रमाइलो भाथ्यो।
Aakar Anil April 12, 2013 at 3:08 PM
I did it last year. Memorable. :)
:) निकै रमाइलो लाग्यो सरको यो पोष्ट ... भिडियो पनि रमाइलो रै'छ, हेर्दा आफैँ उड्न जाम् -जाम लाग्दैछ ..:)बधाइ छ बसन्त सरलाई यो सुन्दर र साहसी अनुभवको लागि !!